Football Khabar » युभेन्टसको योजना : सके मार्सेलो, नत्र हर्नान्डेज !
युभेन्टसको योजना : सके मार्सेलो, नत्र हर्नान्डेज !
इटालियन क्लब युभेन्टसले स्पेनिस रियल मड्रिडबाट ब्राजिलियन लेफ्ट ब्याक मार्सेलो भित्र्याउन चाहेको छ । आफ्ना सुपरस्टार खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डोसँग सुमधुर समबन्ध भएका मार्सेलो भित्र्याउन सक्दा रोनाल्डोलाई मैदानमा थप सहयोग पुग्ने युभेन्टसको निष्कर्ष छ ।
तर, रियलले मार्सेलो बेच्ने सम्भावना कम छ । जिनेदिन जिदानले मार्सेलोलाई विशेष मान्ने हुँदा उनी रियलमै रहने सम्भावना छ ।
यस्तो अवस्थामा युभेन्टस मार्सेलो भित्र्याउन नसके सोही क्लबका युवा लेफ्ट ब्याक थियो हर्नान्डेज भित्र्याउने योजनामा लागेको छ । हाल २१ वर्षका मात्रै रहेका थियो युवा भएको र द्रुत गतिका खेलाडी भएकाले युभेन्टसका लागि उनी प्रभावकारी विकल्प हुनेछन् ।
यसअघि रियलबाट लोनमा रियल सोसिडाड पुगेका उनी लोन अवधि सकिएर रियल फर्किसकेका छन् । तर, रियल फर्किए पनि जिनेदिन जिदानको नेतृत्वमा उनले मौका पाउने सम्भावना छैन । किनभने, यसअघि पनि जिदानले थियोलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका थिएनन् ।
यो अवस्था बुझेको युभेन्टसले थियोलाई सजिलै भित्र्याउन सकिने ठानेको छ । रियलले फ्रेन्च खेलाडी हर्नान्डेजलाई ३० देखि ४० मिलियन युरोसम्ममा बेच्ने सम्भावना छ ।
प्रकाशित मिति ६ असार २०७६, शुक्रबार १६:२०